Rosiana ny mpisolovava - Vaovao, Lahatsary Lahatsoratra
Mpisolovava rosiana izay lasa tamintsika ny famotorana raha nisy ny fifandonana misy eo amin’ny Rosiana sy ny Filoha Donald Trump ny fampielezan-kevitra dia voampanga amin’ny tsy misy ifandraisany amin’ity raharaha ity. Tohizo ny famakiana Ny mijery ny Trompetra ekipa miovaova ny fanazavana ny fivoriana, ary nahoana no zava-dehibe. Tohizo ny famakiana notombohina tamin’ny vy afa-po dia nosoratana na amin’ny anaran’ny ny manohana ara-bola sy ny tsy Vaovao Manerantany’ ny mpiasa miandraikitra ny fanoratana.
Notombohina tamin’ny vy afa-po dia nosoratana na amin’ny anaran’ny ny manohana ara-bola sy ny tsy Vaovao Manerantany’ ny mpiasa miandraikitra ny fanoratana.
Raha te-hianatra bebe kokoa
Ny filoha Donald Trump ny alahady niaiky fa amin’ny Trompetra Tilikambo fihaonana eo amin’ny Kremlin-mifandray mpahay lalàna sy ny zanany no mba hanangona vaovao mikasika ny politika mpifanandrina. Tohizo ny famakiana notombohina tamin’ny vy afa-po dia nosoratana na amin’ny anaran’ny ny manohana ara-bola sy ny tsy Vaovao Manerantany’ ny mpiasa miandraikitra ny fanoratana.
Miaramila Colin Jost nandeha mba mangataka ny rahalahy ny momba ny fizotry ny famotorana mikasika Trompetra Jr.
‘s nihaona tamin’ny mpisolovava rosiana
Tohizo ny famakiana Ny mpisolovava soso-kevitra izay, satria ny zava-Miafina ny asa Fanompoana namela ny fivoriana, dia tsy»nefarious»Tohizo ny famakiana Ny filoha ny zanaka manana ampahibemaso discounted ny fivoriana, nilaza fa tsy nandray ny vaovao nampanantenaina. Tohizo ny famakiana Ny ilay mpanao gazety izay nanao Donald Trump Jr, mba hihaona ny mpampanoa lalàna rosiana dia nilaza fa nangataka ny mpihira sady mpamoron-kira Emin Agalarov. Tohizo ny famakiana Kremlin-mifandray amin’ny mpisolovava Natalia Veselnitskaya fantatra noho ny ezaka undercut ny sazy rosiana mpiaro ny zon’olombelona mpampijaly.
Rosiana real estate lalàna rosiana ny rosiana Mpisolovava an-Tserasera